गर्मीलाई टक्कर दिनकै लागि लाखौ पर्ने कारमा लिपियो गाईको गोबर, हेर्नुहोस !
जेठ ०८, २०७६ GA
गर्मीको मौसमले वातावारण नै अस्तव्यस्त भईरहेको अवस्थामा मानिसले यसबाट बच्नका लागि अनेकौं उपाय अपनाउने गर्छन। यस्तैमा भारतको गुजरात प्रदेशस्थित अहमदाबादकी एक महिलाले गर्मिबाट बच्नका अनौठो उपाय अपनाएकी छिन। उनले गरेको …
अन्तत; थाईल्याण्डका राजाले गरे आफ्नै बडीगार्डका साथमा बिवाह !
बैशाख १९, २०७६ GA
थाईल्याण्डका राजा वाजिरालोंग कोर्नले बुधवार आफै बडीगार्ड सुथिदा तिदजईका साथमा बिवाह गरेका छन। बिवाह पश्चात राजाले सुथिदालाई रानीको उपाधि दिएका छन। थाईल्याण्डका जनताहरु राजाको यस्तो अचानक भएको विवाहलाई लिएर आश्चर्यचकित …
चैत १७, २०७५ BN
काठमाडौँ, १७ चैत (रासस) : ‘रोटीबेटी’को भारत–नेपाल सम्बन्धभन्दा माथि नेपालको शान्ति र समृद्धि भारतीय स्वार्थ भएका हिन्दुस्तानका एक जना युवा नेताले बताएका छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अवधारणा साकार …
उत्साहका साथ सकियो लगानी सम्मेलन, के-के परियोजनामा कति लगानी भित्रिदैछ ?
काठमाडौँ, १६ चैत (रासस) : आर्थिक समृद्धिको मार्ग चित्र पहिल्याउने लक्ष्यका साथ सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलन उत्साहपूर्णरुपमा सम्पन्न भएको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सङ्कल्प पूरा गर्ने र …